Amai Madzongwe Vanoti Madzimai Ngaawande Muparamende
Chikumi 09, 2017
Mutungamiri wedare reSenate, Amai Ednah Madzongwe, vanoti kunyange hazvo huwandu hwenhengo dzeparamende dzechidzimai hwawanda zvakanyanya mudare reparamende, pane mukana wekuwedzera nhengo idzi kuti dziwande semawandiro akaita vanhukadzi munyika.
Vachitaura pazuva rechipiri rezviratidwa zveparamende zve Parliament Open Day, Amai Madzongwe vati madzimai awanda chose mudare iri kana zvichienzaniswa nepakatanga paramende muna 1924 apo paive nemudzimai mumwe chete mudare iri.
Vatiwo huwandu hwemadzimai hwange huri kukura kubva muna 1980 kusvika pari zvino apo pave nenheno dzechidzimai zvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana panhengo dzose dzeparamende.
Asi vanoti havasi kufara kuti varume dzivo vachakawanda muparamende.
Mutevedzeri wemutauriri wedare repararmende reNational Assembly, Amai Marble Chinomona, vatiwo zvakakosha kuti vanhu vahotere madzimai kuvamirira muparamende nekuti ndivo vanonzwisisa matambudziko avo ose.
Mukuru wechikoro chepamusoro cheWomen’s University in Africa, Amai Hope Sadza, vanoti zvinogona kuti madzimai akawanda avhoterwe kupinda muparamende vachiti madzimai akawanda pari zvino achiri kutya kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Amai Madzongwe vanoti budiriro huru yemadzimai yakauya muna 2013 apo pakaumbwa bumbiro remitemo rinopa madzimai zvigaro makumi matanhatu zvisingakwikwidzwe mudare reNational Assembly.